Muuqaal soo koobaya xilliyadii ugu fiicnaa uu Ronaldo la qaatay Juventus ka hor wacdarihii xalay – Gool FM
(Turin) 13 Maarso 2019. Weeraryahanka kooxda kubadda cagta Juventus ee Cristiano Ronaldo ayaa xalay sameeyey bandhig aan caadi ahayn waxaana uu kooxdiisa u soo saaray siddeed dhammaadka Champions League.
Cristiano Ronaldo ayaa markale qabsaday bogaga hore ee Wargeysyada ka fallooda ciyaaraha kaddib saddexleeydii uu xalay ka dhaliyey kooxda Atletico Madrid.
34-sano jirkaan kaasoo afar koobabka Yurub ah kula guuleystay kooxda Real Madrid ka hor inta uusan u soo dhaqaaqin Talyaaniga bishii July ee la soo dhaafay ayaa saddexleey ka kacay xalay kulankii ay Atletico Madrid ku soo dhoweeyeen Turin.
Lugtii hore ee wareegga 16-ka Koobka Horyaalladda Yurub ayaa kooxda Juventus looga soo adkaaday 2-0, laakiin kulankii ka dhacay xalay Turin ayaa kooxda Atletico looga badiyey 3-0 waxaana saddexda goolba ugu shubay CR7, taasoo kooxda reer Talyaani u sahashay inay u soo baxdo siddeed dhammaadka tartanka Champions League.
Haddaba waxaa muuqaalkan hoose oo ka yar labo daqiiqo lagu soo koobay xilliyadii ugu fiicnaa ee Ronaldo uu ka sameeyey Magaalada Turin ka hor taariikhdii uu xalay dhigay.
Guji halkaan si aad u daawato muuqaalka CR7: